Manaramaso ny “cybercafes” ny polisy ao Mumbai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2019 3:01 GMT
Amin'ny ady ataony amin'ny fampihorohoroana, dia mikasa ny hametraka mpandrakitra zavatra tendrena amin'ny kitendry any amin'ny cybercafe ny polisy ao Mumbai. Araka ny filazan'i Vijay Mukhi, Filohan'ny Orina Mpanasoa Misahana ny Teknolojia sy ny Fiarovam-baovao:
Mila mametraka programa izay hahitana ny zavatra tendrena ara-potoana amin'ny pikantsary ny polisy, ka hiverina indray any amin'ny lohamilina iray mandray ny angon-drakitra rehetra.
Afaka manara-maso ny fifandraisana rehetra eo amin'ny mpampihorohoro avy eo ny polisy, na aiza na aiza ny faritra manerana izao tontolo izao iasan'izy ireo. Izany no hany fomba hanarahamaso ny aterineto sy ny fomba fijerin'ny polisy mpanome vaovao amin'ny vanim-potoanan'ny aterineto.
Ity rindrambaiko vaovao fanarahamaso antsoina hoe CARMS (Rafitra fanarahamaso an-davitra amin'ny fidirana aterineto), takian'ny polisy ao Mumbai amin'ny cybercafe miisa 500 ao an-tanàna ho apetraka ity, “dia hahita izay tendren'ny mpiserasera rehetra amin'ny kitendry ary hanome izany vaovao izany any amin'ny governemanta – saika amin'ny fomba ara-potoana amin'ny alalan'ny feon'izany, “hoy ilay mpanao gazety Indiana, Amit Varma.